Emirata Arabo Mitambatra - Wikipedia
Sainam-pirenenan' ny Emirata Arabo Mitambatra
Ny Emirata Arabo Mitambatra dia fanjakana federaly niforona tamin' ny taona 1971, izay hita ao Atsinanana-Afovoany eo anelanelan' ny Hoala Persika sy ny Hoalan' Ômàna. Izao avy ireo emirata miisa fito mamorona azy: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaïwain, Fujaïrah ary Ras al-Khaïmah. Ny renivohitra iraisany dia ny tanànan' i Abu Dhabi.
Atao hoe الإمارات العربية المتحدة / al-imārāt al-ʿarabiyyat al-muttaḥida na دولة الإمارات العربيّة المتّحدة / dawlat al-imārāt al-ʿarabiyyat al-muttaḥida izy amin' ny teny arabo.
Isan' ireo firenena mpamokatra sy mpanondrana solitany be indrindra ny Emirata Arabo Mitambatra. Ny emiratan' i Abu Dhabi, izay efa tao amin' ny Fikambanan' ny Firenena Mpamokatra Solitany talohan' ny niforonan' ny Emirata Arabo Mitambatra, no ahitana tahirin' etona sy tahirin-tsolitany lehibe indrindra, Ireo emirata fito mitambatra ao ireo dia tsy mitovy raha ny fananana solitany no resahina. Ny emiratan' i Dubai dia nivadika nitrandraka loharanon-karena hafa taty aoriana, ka isan' izany ny seranan-tsambo afa-kaba, ny haitao vaovao, ary indrindra ny fizahàn-tany. Ny tananan' i Dubai koa dia lasa renivohitra ara-toekaren' ny Emirata Arabo Mitambatra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Emirata_Arabo_Mitambatra&oldid=1045817"
Voaova farany tamin'ny 18 Jiona 2022 amin'ny 12:57 ity pejy ity.